नेपालीलाई मुण्डन गरेपछि,ज्ञानेन्द्र शाहिले दिए भारतलाई हिन्दिमै ठाडो चे तावनी ! भिडियो हेर्नुहोस – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Video/नेपालीलाई मुण्डन गरेपछि,ज्ञानेन्द्र शाहिले दिए भारतलाई हिन्दिमै ठाडो चे तावनी ! भिडियो हेर्नुहोस
एजेन्सी, २ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामको जन्मबारे दिएको अभिव्यक्तिका कारण भारतको बनारसमा नेपालीमा माथि ज्या दती भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत सोमबार अयोध्या नेपालकै भूभाग रहेको र भारतले नक्कली अयोध्या खडा गरेको अभिव्यक्ति दिनुभएकाे थियाे ।
प्रधानमन्त्री ओलीकाे उक्त अभिव्यक्तिपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निर्वाचन क्षेत्र रहेको बनारसमा भारतीय विश्व हिन्दू सेनाका कार्यकर्ताले काम गर्न गएका एक नेपालीको जबरजस्ती कपाल मुण्डन गरिदिएका छन् । ती नेपालीको शिरमा जय श्रीरामको नारासमेत लेखिदिएका छन्।
त्यसपछि उनीहरुले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मावि रुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरुले नेपालका प्रधानमन्त्रीका वि रुद्ध बोल्न लगाउनका साथै राम नेपालमा हैन भारतमा जन्मिएको हो भन्ने जस्ता ना रा लगाउन लाएका थिए ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान रामको जन्म नेपालमा भएको हो भारतमा होइन भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएपछि भारतीय हिन्दूहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले वि रोध गर्दै आएका छन् । त्यस्तै उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो भनाइ फिर्ता लिन चे तावनी दिएका छन् ।
श्राबण महिनामा बिबाहित महिलाले गर्नै पर्ने ५ काम (हेर्नुहोस भिडियो)